okuphathelene nomngcele Ikhompyutha yizici non-core ngcondvomshini. Ngaphandle kwawo, usengakwazi ukwenza imisebenzi ebalulekile. Ngakho, uma ixhunywe unina ibhodi RAM amamojuli, CPU, adaptha yevidiyo, ugesi nalolo ingxenye izingxenye, idivayisi kwikhompyutha neuropathy (PC) kuthiwa iqembu elisizayo. Ukuze sicacise leli phuzu ukusetshenziswa isifaniso, nokumadanisa ikhompyutha nomuntu wesilisa. Izixhumi PC kungafaniswa ezandleni nasezinyaweni: bona kakhulu nekwakheka kwelulwimi etimeni imisebenzi. Kule ndaba, i-computer uwina, kusukela khona esibonakalayo izimbobo kungenziwa exhunywe yimuphi izixazululo lobuchwepheshe ekhona, okwenza kube jikelele Computing uhlelo.
Kuye uya khona, sebenzisa ngezigaba elandelayo okuphathelene nomngcele:
- izixazululo idatha input / okuphumayo;
- amadivayisi izidingo isitoreji idatha;
- Kudivayisi ukuze exchange of digital (noma analog) eligeleza nezinye izakhi.
Ake sihlole kabanzi eqenjini ngalinye.
PC okuphathelene nomngcele, eyenzelwe kufakwa, igundane kufanele ukuholwa ikhibhodi. Lesi sakamuva iqoqo izinkinobho, ngokucindezela ngamunye okuhambelana ethile binary code. Kuyinto ngosizo uhlelo kukhompyutha uyazi ukuthi kwathiwa sicindezelwe, kuhlanganise inhlanganisela ezahlukene. ikhibhodi yanamuhla neze, njengoba ukusebenza okuqhubekayo izandla ukhathele ku ukubekwa uphawu inkinobho akuyona elikhulu, lo mshini ukubuya ukhiye ecindezelwe akuyona njalo qualitatively ubukele. Cishe bonke abakhiqizi ukunikela imodeli ethuthukisiwe, lapho izici oshiwo ngenhla kunakwe. Nokho, banalo lenani eliphakeme kakhulu, ayivumeli izinqumo ezinjalo ukuze kungene niche mass emakethe.
Kuye indlela uxhumano ukuhlukanisa amadivayisi okunentambo nokungenantambo. Leli qembu kungafaka phakathi amageyimu joysticks, ahamba ngebhayisikili kanye namasondo ayo, izibhamu ukukhanya, amasondo ayo indiza simulators.
I manipulator-uhlobo "igundane" yathi chithi saka emva popularization of yokusebenza izinhlelo sokuqhafaza interface yomsebenzisi, tincenye okuyizinto ukuphatha okhiye pointer. Okwamanje, kukhona esikhundleni kancane kancane zakudala wire wokwenza kulula, baxhumana ikhompyutha ngomsakazo amaza.
Faka ulwazi bese ibhadalele nokuthengisa kwayo nayo eyenziwa scanner. Le mishini ingase yingxenye Mvuni ehhovisi - MFP ehlanganisa kwelinye izindlu iphrinta kanye isithwebuli. Kukhona hhayi kuphela engashintshi, kodwa futhi izixazululo manual, kulula kakhulu kwezinye izimo.
Ukungakwazi ukubonisa imiphumela yomsebenzi, ikhompyutha kungaba "into ngokwako" - uhlobo black box, engenamsebenzi. Kukhona ezahlukene kumadivayisi okukhipha, lowo oyinhloko okuyinto qapha. Ngaphandle kwayo, umsebenzi wesikhathi esigcwele ngekhompyutha akunakwenzeka. Kuye isimiso wokuphindisela izithombe, ukuhlukanisa phakathi CRT futhi LCD izixazululo.
Ngaphandle ukwakha isithombe esikrinini ngokufaka wokufaka iphrinta bangathola ikhono idatha okukhipha ephepheni noma enye imidiya efanayo.
PC okuphathelene nomngcele neqembu lesibili ukukhonza isitoreji eside idatha digital. Kuyinto hard drive, amadiski compact, itheyiphu ngemoto (esimaphakathi - tape), oshayelayo disk kanye flash oshayelayo.
Exchange kwemininingwane inikezwa kuya modems futhi inethiwekhi amakhadi.
Ikhibhodi Japanese. Uyithola kanjani i-computer ukukhuluma isi-Japanese?
Isilawuli Genius - labo bazi ukuthi ukulalela
Umhlobo esifundeni Perm. Izitshalo nezilwane Perm esifundeni
Ukubunjwa okutshani obomvu
Isikhathi umsebenzi - indlela ukwandisa umkhiqizo
Gymnastics Dynamic: imithetho yokuphepha kanye umzimba